Muselọ ihe ngosi nka mbụ ewepụtara kpam kpam nye Apple na Spain ga-emepe | Esi m mac
Cáceres dị na chi, n'ihi na site taa, ọ ga-ekwe omume ileta ụlọ ngosi ihe mgbe ochie Apple na Spain n'obodo Extremadura. E nwere ọtụtụ sayensị na kọmputa sayensị ngosi ihe mgbe ochie, ma onye a na-ezubere naanị maka Macs si ụlọ ọrụ na bitten apple. Echiche a sitere na oke mmasị na kọmputa Mac, onye chịkọtara dị ka mkpokọta kọmputa ndị mahadum na kọleji tụfuru na ya onwe ya rụzigharị ma ọ bụ weghachite. Nleta nke ebe ngosi ihe mgbe ochie na-eje ozi iji hụ mmalite nke Apple, ọtụtụ n’ime ha mebiri ọdịdị aesthetics nke ahịa, na site n’ọzọ ọzọ, anyị nwere ike ịhụ etu teknụzụ sirila aga kemgbe ọtụtụ afọ.
Na ihe ngosi anyị ga-ahụ ihe karịrị kọmputa 40 site na afọ 40 gara aga. Akụrụngwa dị ka ihe nnọchianya maka ụlọ ọrụ dị ka Apple I, ruo mgbe G5 ikpeazụ. Onye rụrụ ọrụ a bụ Carlos Izquierdo, onye na-achịkọta kọmputa Mac afọ 20. Na mbu, o kpebiri idobe ụfọdụ ngwa ọrụ dị ka naanị ihe ochie na mkpokọta, mana ugbu a ọ chọrọ iji meziwanye ngosi ahụ site na ịzụrụ ngwa ọrụ ọhụụ.
Na nchịkọta Anyị nwere ike ịnụ ụtọ, na mgbakwunye na Apple Apple na G5, ndị dị ka Vintage dị ka Apple Lisa, Macintosh, Apple II, nke mbụ site na afọ 77, na 20th Anniversary Mac. Ndị nke a bụ ụdị nke kachasị sie ike ịchọta, ebe ha bụ mpempe akwụkwọ pụrụ iche nke bara nnukwu uru. Mgbalị ndị njikwa ahụ gụnyere ụlọ akwụkwọ dị na United States, iji nweta ngwa ọrụ amachaghị na Spain ma ọ bụ Europe, ọbụlagodi ezigbo ndị Apple.
Ọzọkwa, dị ka onye na-eweghachi kọmputa, ị na-eme ka kọmputa gị niile na-arụ ọrụ. N'ụzọ ụfọdụ, ọ bụghị ebe ngosi ihe mgbe ochie, kama ọ bụ gbalịa ibuga ihe teknụzụ dị ka afọ 20 gara aga, iji gosi ndị ọbịa nnukwu ọganiihu teknụzụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ileta ebe ngosi ihe mgbe ochie, ọ na-emeghe site na Tuesday ruo Saturday site na 11am ruo 14pm na site na 18pm ruo 21pm, ma e wezụga na Sunday mgbe ọ na-emeghe site na 11am ruo 14pm. Nwekwara ike ịga na ya n'onwe gị ma ọ bụ debanye aha maka njem nlegharị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Muselọ ihe ngosi nka mbụ ewepụtara kpamkpam na Apple na Spain ga-emepe
A MacBook Pro Retina 13 "site na 2015 maka euro 1199
Tọghata gị ochie video DVD ka faịlụ na DVD Ripper Pro